Umshini we-MO namaCartridge
Abaculi abaningi be-tattoo sebeqalile ukusebenzisa imishini ye-MO brand kanye ne-cartridges, futhi abahlinzeki abaningi be-tattoo badinga ukuthengiswa okukhethekile nokuphakanyiswa ezifundeni zabo. Inhloso yomkhiqizo wethu we-MO ukwenza abaculi be-tattoo babe nesipiliyoni esingcono se-tattoo ngemishini ye-MO tattoo, nokwenza imishini ye-tattoo ...
Umshini We-Pen Tattoo Ongenantambo
Umshini we-tattoo uyimishini ebalulekile ngenkathi kudwetshwa. Wonke umculi we-tattoo usebenzisa inani elifanele lemali ekuthengeni umshini we-tattoo. Umshini esiwusebenzisayo manje izinsuku uthuthukile futhi uza nezici eziningi, kunentuthuko eminingi kwezobuchwepheshe eyenzeke nge ...
Ukuthuthukiswa kweTattoo Cartridges
Ukuthuthukiswa kwemishini ye-tattoo, kusuka kuzinaliti ze-tattoo zendabuko kuya kwezinaliti ze-cartridge, kwenze ama-tattoos alula kakhulu, futhi asebenziseka kalula. Eminyakeni yamuva, inalidi ye-cartridge ibuse emakethe yenaliti ye-tattoo emhlabeni. IMOLONG TATTOO SUPPLY inezindawo eziningi zeye ...